Ammaan darro sii korodhay ayaa qasabtay MSF inay ka tagto Rugteeda Caafimaad ee oogu wayneed soomaaliya - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Ammaan darro sii korodhay ayaa qasabtay MSF inay ka tagto Rugteeda Caafimaad ee oogu wayneed soomaaliya
17.06.2009 | War-Saxaafadeed
Nairobi/Brussels – sagaal sano ka dib oo daryeel caafimaad ay siinaysay bulshada ku nool gobolka Bakool, Hay’adda Dhakaatiirta aan Xudduuda lahayn ee MSF ayaa gaartay go’aan ay ka xuntahay inaan ammaan nagu filan aan haysanin oon shaqadeena ku sii wadano. Goáankan waa goán MSF keliya qaadatay, mana ahaan in maamulada jira inay naga fiijiyeen. Hawlaheena caafimaad wa ay ka sii soconayaan meelaha kale ee soomaaliya.
Soomaaliya waa meel aad u adag in laga bixiyo caaawinaad baniiadameed sida ay muujisay af duubkii labada shaqaale caafimaadeed ka dhacday gobolka Bakool April 2009. MSF waxay mahad naqaysaa sida wanaagsan oo dhacdadii lagu xalliyay lagu kaalmaystay caawinaad bulshada laga helay.Afduudbkii iyo dhacdooyin aad halis u ah sanadihii la soo dhaafay ka dib, MSF ma awoodo inay si nabad galya leh ugu siiso daryeel caafimaad oo tayo leh bulshada ku nool gobolka Bakool. Bilooyinkii la soo dhaafay, mashaakil nabadgalyo awgood ayee MSF waxay mashruuca kuwaday ayadoo meel fog ka joogto taas oo raacsan booqasha gaaban ay samaynaayeen shaqaala ajnabi oo farsamada ku kaalmaynaaye. Af duubkii oo ka daba imaaday, surtagalnimada shaqada lagu sii wadi lahaa wa ay soo afjarmatay.
”Baahida baaxadda leh ee ka jirta Bakool iyo wixii ka shisheeyaa waxaan shaqada ku sii wadnay xaalad adag, laakin nasiib daro, waa inaan qiranaa khatarta halkaas taalo inay gaartay xadr aan la aqbali karin” waxaa yiri Jerome Oberreit Agaasimaha Mashaariicda MSF.
MSF waxay si qoto dheer leh uga xuntahay waxa ka soo gaaraya go’aankan bulshada Bakool iyo si gaar ahaan u aqonsanayso dadaalada ay shaqaalaha Soomaaliyeed muujiyeen sagaalkii sana ee la soo dhaafay.
Hawlaha MSF ee Bakool waxaa ka mid ah Rug Caafimaadeed oo ku taalo Xuddur- Qalab bukaan jiif ugu wayn bartamaha iyo koonfurta soomaaliya- iyo afar gobo caafimaadeed oo ku kala yaala Labaatan jirow, Ceel Garas, Ceel Barde iyo Rabduure.
Sagaalka sana ee mashruuca uu ku guda jiray, Rugta Caafimaad ee Xuddur waxay ka balaaratay hal Rug nafaqayn oo loogu tala galay dadka nafaqa darada haysato, ilaa ay ka noqotay Rug Caafimaad oo si buuxda u shaqayso taas oo qaadi karta 278 sariirood iyo 157 shaqaala oo si joogta ah tababar u qaadaata.
Laga bilaabo 2002 Rugta Caafimaad ee Xuddur iyo gooaha caafimaadeed waxay samaysay wada tashi caafimaadeed 272,700 oo bukaan socod ah, inta kale na 11,075 la jiifiyay Rugta Caafimaad. 3,314 oo ka mid ah na waxa laga daaweeyay cudurka Kala Azar iyo 945 laga daaweeyay cudurka TBda. 1,913 ciyaal na waxaa laga daaweeyay nafaqa dari aad u daran.
14kii bilood ee la soo dhaafay, MSF waxay qasab ku noqotay inay sadax mashaaric xirto weerar iyo af duub loo gaystay shaqaalaheeda soomaaliya awgeed. Hawlgal Caafimaadeed oo bilaash ah oo MSF ay ka wado gobolada Banaadir, Baay, Galgaduud, Hiiraan, Jubbada Hoose, Shabeelada Dhexe iyo mudug waxay ku xiranyihiin bushadaha iyo maamulada inay sameeyaan xaalada ka celin karta inay dhacdooyinkaas ku aadan shaqaalaha iyo goobaha caafimaadeed.
Hay’adda Caafimaadka ee caalamiga ah ee Dhakhaatiirta aan Xudduuda Lahayn (MSF) waxay ka shaqaysay Soomaaliya laga bilaabo sanadkii 1991.
Laga bilaabo Janaayo 2008, Mashaariicda MSF ay ka wado Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya waxaa waday shaqaala soomaaliyeed oo hooshooda u go’ay, kuwaas oo kaalmaynayeen Shaqaala ajaanib ah oo jooga Nairobi kuwaas oo booqda markay nabadgalyada saamaxdo. Balan qaadyada, dadaalada iyo geesinimada ay shaqaalaha soomaaliyeed hayeen ayaa awood u yeeshay MSF inay sii wado bixinta daryeel caafimaadeed boqolaal kun oo soomaali ah sanadkii 2008.
2008dii kooxda MSF waxay bixisay 727,428 wada tashi caafimaadeed, kuwaas oo ka mid ah 267,168 caruur da’dooda kayar shan jir. Inka badan 55,000 oo haween ah waxaa la siiyay wada tashi ku saabsan daryeelka hooyoda urka leh iyo inka badan 24,000 oo qof ayaa la jiifiyay cisbitaalada iyo rugta caafimaad ee ay gacanta ku hayso MSF. 3,878 qalliin ayaa la fuliyay, waxaa ka mid ah 1,249 oo dhaawac ka soo gaaray rabshado. Kooxda caafimaadka waxay daaweeysay 1,036 qof oo qaba cudur halis ah oo la ilaabay Kala Azar, inka badan 4,000 oo duumo hayso waxayna bilawbeen daaweynta 1,556 qof oo TBda hayso. Ku dowaad 35,000 oo qof oo ku dhacday nafaqo dari ayaa lagu siiyay cunno iyo daryeel caafimaadeed iyo 82,174 ayaa talaal la siiyay.
Tags: amaan daro, Gobolka Bakool, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya, xudur
Qoraalada kale ee ku saabsan War-Saxaafadeed
Dhadhaab: hoggaamiyeyaashu waa in aaney guul-darro u keenin xerada qaxootiga ee dunida ugu weyn.
MSF OO XIREYSA MASHRUUCEEDA CAAFIMAAD EE UGU WEYN MUQDISHO DILKII SHAQAALAHEEDA KA DIB